Haweenka Gedo Oo Hubka U Qaatay Iska Difaacida Ciidamada Kenya.(Sawiro) – Heemaal News Network
Qaar kamid ah degmooyinka Gobolka Gedo waxaa wali ka socda banaan baxyo looga soo horjeedo falalka ay ciidamada Kenya ku leynayaan dadka reer miyiga ah ee kunool qeybo kamid ah gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ceel-Waaq.
Dad ka careesan xadgudubka Kenya ka wado gobolka Gedo ayaa maanta banaan bax balaaran ka dhigay degmada Garbahaarey ee caasimada gobolka Gedo, waxa ayna dadkan ku dhawaaqayeen hadalo ka dhan ah Ciidmada Kenya.
Haween ka qeyb qaadanayay banaan baxa ka dhacay degmada Garbahaarey ayaa soo qaatay qoryaha AK-47, Mindiyo iyo Masaaro , waxa ayna sheegeen in diyaar u yihiin in ay isaga difaacaan ciidamada Kenya ee sida gardarada ah shacabka u leynaya.
Banaan baxayaasha ayaa wajiyadooda waxaa ka muuqatay caro xoogan oo ka dhalatay falalka ciidamada Kenya ku leynayaan dadka shacabka ah ee kunool deegaano dhaca degmada CeelWaaq.
Dowlada Soomaaliya ayaan wali qaadin talaabooyin ka dhan ah ciidamada Kenya ee dadka shacabka ah ku leynaya gobolka Gedo, mana jiro wali Xukuumada Soomaaliya war rasmi ah ay kasoo saartay xadgudubka Kenya.